Xiisadda Ukraine: Kyiv oo codsi aan laga fileyn u dirtay Ruushka – WARSOOR
YUKRAYN – (WARSOOR) – Ukraine ayaa codsatay inay kulan la yeelato Ruushka iyo dalal kale oo ka tirsan guddiga ammanka Yurub, si looga xaajoodo xiisadda sii xoogeysanaysa ee ka taagan xuduudda labada waddan.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Ukraine, Dmytro Kuleba, ayaa sheegay in Ruushka uu dhagha ka furaystay codsi rasmi ah oo ku aaddan inuu sharraxo sababta uu ciidamada tirada badan u geeyay xuduudda.
Waxa uu intaa raaciyay in tallaabada xigta ay tahay in dalkiisa uu diro codsi ku aaddan kulan dhaca 48 saacadood gudahood, si Ruushka loogala hadlo waxa uu damacsan yahay.
Xukuumadda Moscow ayaa marar badan beenisay inay duulaan ku tahay Ukraine, inkastoo ay ciidan ka badan 100,000 oo askari ay ku daabushay meel u dhaw xuduudda labada dal.
Dalal badan ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda inay ka baxaan Ukraine, iyagoo ka cabsi qaba in haddii uu Ruushka billaabo dagaalka ay adkaan doonto daadgureyntooda.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Ruushka ayaa ku eedaysay dalalka Galbeedka inay faafinayaan macluumaad been ah.
Warbaahinta CBS News oo soo xiganaysa saddex ilo wareed ayaa sheegtay in Maraykanka uu shaqaalihiisa kala bixi doono Ukraine 48 saacadood ee soo socda.
Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, oo dhaliilay cabsida ka dhalan karta tallaabooyinka ay dalalka muwaadiniintooda uga saarayaan dalkiisa, ayaa sheegay in uusa arag caddeyn muujinaysa in Ruushka uu qorsheynayo duullaan dhaca maalmaha soo socda.
Dalabka ugu weyn ee Ruushka ayaa ah in Ukraine aysan weligeed ku biiri karin gaashaanbuurta NATO, balse dalalka Galbeedka ayaa diiddan arrinkaas iyagoo ku doodaya in isbahaysiga uu leeyahay siyaasad soo dhaweyneysa xubno cusub.
Hase yeeshee safiirka Ukraine u fadhiya London, Vadym Prystaiko, ayaa BBC u sheegay in dalkiisa uu aqbali karo dalabka Ruushka, si xaaladda loo dejiyo.
“Ma saadaalin karno mustaqbalka, mana ogin waxa dhici doona, balse khatarta waa mid saraysa, waxaana loo baahan yahay in si degdeg ah ay [muwaadiniinta] uga baxaan dalkaas” ayuu yiri Sullivan.
La-taliyaha ayaa intaa raaciyay in maamulkiisa aanu ka war-qabin in Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, uu gaaray go’aan kama dambeys ah oo ku aaddan duulaanka, balse Aqalka Kremlin uu raadinayo marmarsiyo uu ku billaabo dagaalka.
Xaaladda ka taagan Ukraine ayaa ku soo beegmaysa sideed sano kadib markii uu Ruushka xoog kula wareegay gobolka Crimea. Tan iyo waagaas, ciidamada Ukraine ayaa dagaal aan dhammaan kula jiray fallaago gacan ka helaysa Ruushka oo ku sugan xuduudda bari.
Ciidamada badda ee Ruushka ayaa Jimcihii dhoolatus ka sameeyay Crimea.
Khubarada milateri ayaa tilmaamay in dhoolatuska uu Ruushka ka wado dalka Belarus ay khatar weyn ku tahay caasimadda Kyiv, oo haddii uu dagaal qarxo ay Moscow si sahlan ku weerarri karto magaaladaas xarunta u ah Ukraine.
Guddiga hirgelinta doorashada Somaliland oo shaaciyay guddiga xulista ergada Doorashada 3-kursi